ट्रम्पले साँच्चै चीन विरूद्ध ‘फायर’ खोल्न लागेका हुन र ? - Jhilko
ट्रम्पले साँच्चै चीन विरूद्ध ‘फायर’ खोल्न लागेका हुन र ?
काठमाडौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनको विरोध गरी चुनाव जित्न लागेका हुन कि साँच्चै चीनसँग युद्ध लड्न ‘फायर’ खोल्ने तयारीमा लागेका हुन् । कोरोनाभाइरस महामारीका बारेमा अमेरिकाले चीनमाथि आरोप लगाउँदै अभियान चर्काउन लागेको देखिएको छ ।
ट्रम्पले भने “ चीनले जानी जानी कोरोनाभाइरस फैलाएको भए त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ । गलती गलती हुन्छ । तर जानी जानी गरिएको रहेछ भने निश्चय नै परिणाम भोग्नु पर्छ ”
ट्रम्पले यो चेतावनी उनले दैनिक जानकारी दिने क्रममा दिए । ट्रम्पले चीन विरूद्ध प्रहार गर्ने शब्द वाण मध्येको यो नयाँ हो । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच तनाव बढ्दै गएकोमा कोरोनाभाइरस प्रकरणले झन बढाउन लगेको देखिएको छ ।
तर ट्रम्पले त्यो परिणाम बारे केही खुलाएनन् । ट्रम्पका बरिष्ठ सहयोगीहरूले कोरोनाभाइरस बारे चीनले अपारदर्शी भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । वुहानमा कोरोनाभाइरस फैलिएको बेला राष्ट्रसंघीय नियोग विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनलाई सहयोग गरेको भनी ट्रम्पले अमेरिकाबाट दिइने कोष रोक्का समेत गरेका छन् ।
अमेरिका र चीन दुबै भाइरसबारे पटक पटक आफ्ना अडान सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । शुरूमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको प्रशंसा गरेका ट्रम्पले पछिल्ला समयमा ‘चिनियाँ भाइरस’ भनी चीनको कठोर आलोचना सम्म गर्न पुगे । पछि विश्व समुदायले आलोचना गरेपछ चिनियाँ भाइरस दोह¥याउन छाडे पनि चीनको विरोध गर्न उनका सहयोगीले छाडेको देखिएन् ।
अमेरिकी सेनाले भाइरस सारेको चिनियाँ अधिकारीहरूको शुरूवाती आरोपलाई ट्रम्पका अधिकारीहरूले आक्रोशपूर्ण तवरले अस्वीकार गरेका छन् ।
ट्रम्प र तिनका सहयोगीहरूद्वारा कोरोनाभाइरस महामारीमा चीनलाई मुछ्नुको पछाडि आगामी चुनावमा फेरि जित्ने ‘दाउपेंच’ भएको कतिपयको बुझाइ छ ।चीन विरोधी भावना भड्काएर ट्रम्पले अधिकांश मतदाताको मत आफ्नो बाकसमा झार्न ट्रम्पले चीनलाई शनिबार यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
आलोचकहरूका अनुसार अमेरिकाले चीनको विरोध गरेर मात्रै केही हुने देखिदैन् । अमेरिका आफै व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरणको आपूर्ति चीनको भरमा टिकेको छ । चीनलाई रिसाइ दिएर यस्ता सामानको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न गराउनु अमेरिकाको भित्री मनसाय हुन सक्दैन् ।
हालै अमेरिका र चीनबीचको बहु अर्ब कृषि सम्झौताका कारण ट्रम्पले सम्बन्ध राम्रो रही आएको जनाएका थिए ।
गत साता फक्स न्युजले वुहानको भाइरससम्बन्धी प्रयोगशालामा यो भाइरस बनाएर चीनले फैलाएको आरोपको बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा ट्रम्पले यसबारे सत्य पत्ता लगाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको बताए ।
शनिबार जानकारी दिने क्रममा ट्रम्पले चुनावसम्बन्धी कुरो पनि उठाए । डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट आफ्नो प्रतिस्पर्धी हुने जो बिडेनबारे पनि बोले ।
ट्रम्पले भने “स्लिपी जो’ जितेमा चीन र अन्य देशले हाम्रो देशलाई कब्जामा लिने छन् ।”
अमेरिकामा ७ लाख २० हजार बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने मर्नेको संख्या ३७ हजार नाघेको छ ।
यसअघि ट्रम्पले चीनले कोरोनाभाइरसबाट मर्नेहरूको संख्या लुकाएको आरोप पनि लगाए ।
यी सबै परिदृश्यमा पर्यवेक्षकहरू दोधारमा परेका छन् । ट्रम्पले साँच्चै चीन विरूद्ध ‘फायर’ खोल्न लागेका हुन कि चीनको विरोध गरी चुनाव जित्ने ‘दाउपेंच’को प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाले लुट्ला भनी मेडिकल सामान गुप्त तवरले ल्याउँदै पेरु
मजदुरको उद्धार गर्दा लडेर प्रदेश सांसद दाहाल घाइते
काठमाडौंका यी ठाउँमा आकाशे पुल थपिँदै
सवारी चाप बढी भएका स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गर्न लागिएको कामपाले जनाएको छ । यी...
डरलाग्दो ग्राफ बढेको छ कोरोनाभाइरसबाट मर्नेको संख्या
१९ मार्चमा कोरोना संक्रमितका कारण १० हजार मृत्यु भएको थियो । त्यसपछिका २२ दिनमा...
इटलीमा नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमितको दर घटदै
सरकारले लकडाउनलाई जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । आज भर्खरै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को...